WordPress होस्टिंग चलिरहेको छ ढिलो? व्यवस्थित होस्टिंग | मा सार्नुहोस् Martech Zone
WordPress होस्टिंग सुस्त छ? व्यवस्थित होस्टिंगमा माईग्रेट गर्नुहोस्
बुधवार, मई 6, 2020 मङ्गलबार, अक्टोबर 27, 2020 Douglas Karr
यद्यपि त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन तपाईंको वर्डप्रेस स्थापना ढिलो चलिरहेको छ (खराब लिखित प्लगइनहरू र विषयवस्तुहरू समावेश गर्दै), म विश्वास गर्दछु कि मानिसहरूलाई समस्या हुनुको एकल सबैभन्दा ठूलो कारण उनीहरूको होस्टिंग कम्पनी हो। सामाजिक बटन र एकीकरणको लागि अतिरिक्त आवश्यकताले मुद्दालाई मिश्रित गर्दछ - धेरै जसो धेरै यति सुस्त लोड हुन्छन्।
व्यक्तिहरूले ध्यान दिए। तपाइँको श्रोता सूचना। र तिनीहरू रूपान्तरण गर्दैनन्। २ सेकेन्ड भन्दा अधिक समय लाग्ने पृष्ठ राख्दा तपाईको साइट छोड्ने आगन्तुकहरूको संख्या बढि बढ्न सक्दछ ... वा खराब ... तपाईंको शपिंग कार्ट। त्यस कारणका लागि, यो आवश्यक छ कि तपाईं आफ्नो गति सुधार गर्नमा काम गर्नुहोस्।
WordPress को लागी, हामी सार्यौं Flywheel र अविश्वसनीय परिणामहरू छन्। हाम्रो साइट लगातार .99.9 XNUMX..XNUMX% वा उच्च माथि छ (र जब यो होइन, यो सामान्यतया हामी यसमा काम गर्दैछौं)। तिनिहरु संग सबै आवश्यक पूर्वाधार र प्रशासकीय उपकरणहरु को लागी तपाइँको साइट को प्रबन्धन गर्न को लागी - वा तपाइँको ग्राहकहरु को सबै साइटहरु - धेरै सजिलो छ:
१-क्लिक पुनर्स्थापना - तत्काल बैकअप र सजिलो स्न्यापशट ब्याकअपको साथ पूर्वावस्था
एजेन्सी सुविधाहरू - ग्राहकको खाता भित्र ग्राहकहरू प्रबन्ध गर्न सक्ने क्षमता
ब्लुप्रिन्ट्स - एक साइटको विषयवस्तु र प्लगइनहरू कस्टम कन्फिगरेसनको रूपमा बचत गर्नुहोस् जुन तपाईं भविष्यका प्रोजेक्टहरू निर्माण गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
क्याचिंग - विशाल स्केलेबिलिटी र गति को लागी क्यासि technology टेक्नोलोजी।
CDN तयार छ - स्थिर सामग्रीको लागि स्पष्ट रूपले द्रुत लोड समयहरू।
क्लोनिंग - सजिलैसँग क्लोन गर्न सक्ने क्षमता।
दैनिक ब्याकअप - तपाईंको आलोचनात्मक अनुप्रयोगहरूलाई समर्थन गर्न स्वचालित, रिडन्डन्ट सिस्टमहरू।
फायरवाल - तपाईको डेटा र बाहिरका खतराहरूको बिरूद्ध बहु, शक्तिशाली फायरवालहरू।
मालवेयर स्क्यानिङ - सक्रिय पहिचान र खतरनाक मालवेयर को उन्मूलन।
समर्थन - अमेरिकामा आधारित WordPress विशेषज्ञहरूको शानदार प्राविधिक समर्थन।
नि: शुल्क एसएसएल - तपाइँका सबै साइटहरूमा SSL सक्षम गर्नुहोस्।
स्थिरता - क्लोन गर्न र एक स्टेजिंग क्षेत्र भित्र काम गर्न क्षमता, त्यसपछि प्रत्यक्ष धक्का।
के होस्टिंग वर्डप्रेस होस्टिंग हो?
हामी clients० भन्दा बढी ग्राहकहरुमा सरेका छौं Flywheel WordPress० भन्दा कम WordPress स्थापनाहरूको साथमा, र यो सबै flawlessly गयो। र Flywheel एक WordPress द्वारा होस्ट सिफारिस गरिएको!
ओह, र मैले उल्लेख गरे कि फ्लाईव्हीलसँग यसको छ आफ्नै माइग्रेसन प्लगइन?
माईग्रेट गर्नका लागि प्रमुख कारणहरू Flywheel समावेश:
WordPress समर्थन - म तपाईंलाई ती सबै समयमा भन्न सक्दिन कि हामी होस्टहरूसँग दौड्यौं जहाँ उनीहरूले सीधा चेतावनीहरूको साथ वर्डप्रेसलाई दोष दिए कि यो समर्थन गरिएको थिएन (यद्यपि उनीहरूसँग प्रायः १-क्लिक स्थापना भए पनि)। अनुमति मुद्दाहरू, ब्याकअप मुद्दाहरू, सुरक्षा मुद्दाहरू, प्रदर्शन मुद्दाहरू ... तपाईं यसलाई नाम दिनुहुन्छ, हामी त्यसलाई दियौं र हरेक होस्टले वर्डप्रेसलाई दोष दियो।
एजेंसी समर्थन - यो एक विशाल फाइदा हो कि ग्राहकले खाताको स्वामित्व राख्छ तर हामी अधिकारप्राप्त प्रयोगकर्ताहरू, अधिकृत समर्थन प्रयोगकर्ताहरू, र अधिकृत FTP प्रयोगकर्ताको रूपमा थपेका छौं। यदि एक ग्राहक हामीलाई छोड्छ, तिनीहरू मा रहन सक्छन् Flywheel र तिनीहरूको सफलता जारी राख्नुहोस्। कुनै अधिक ग्राहकहरु होस्टिंग वा असुविधाजनक प्रवास अवधि राखेर होईन।
सम्बद्ध शुल्क - प्रत्येक पटक जब हामी फ्लाईव्हीलका साथ ग्राहक दर्ता गर्छौं, हामी प्रयोग गर्दछौं Flywheel। हामी हाम्रो ग्राहकहरु संग खुल्ला र इमानदार छौं कि हामी सगाई को केही पैसा बनाउन को लागी ... र हामी तिनीहरूलाई माईग्रेट को लागी शुल्क लिन छैन, तिनीहरूले कुनै आपत्ति छैन।
क्लोनिंग - कुनै साइटलाई निर्बाध रूपमा क्लोन गर्ने क्षमता केवल शानदार छ। अब हामीले स्टेजिंग वातावरण कतै होस्ट गर्नुपर्दैन र त्यसपछि यसलाई होस्टमा सार्न, Flywheel तीनिहरू भित्र निर्माण गरिएको छ। हामी क्लाइन्टलाई प्रगति देखाउन सक्षम छौं, तिनीहरूलाई लगइन गरौं र यसलाई परीक्षण ड्राइभमा लैजान दिन, र यसलाई बटनको केही क्लिकले लाइभ धक्का दिन्छ।
ब्याकअप - स्वचालित वा १-क्लिक ब्याकअप र पुनर्स्थापना राम्रो छ। हामीसँग एउटा ग्राहक थियो जुन तेस्रो पक्षीय एकीकरणको परीक्षण गरिरहेको थियो र प्रत्येक पटक तेस्रो-पार्टीले भने कि तिनीहरू लाइभ हुन तयार छन्, हामी लाइभ चाहन्छौं र यो असफल भयो। हामी तत्काल सेकेन्डको मामलामा अघिल्लो साइट पुनर्स्थापना गर्न सक्षम भयौं जबसम्म उनीहरूको मागको लागि उनीहरूको पूर्वाधार समाधान भएन।
प्रदर्शन - रक ठोस क्याचिंग र एक उत्कृष्ट सामग्री वितरण नेटवर्कले हाम्रा सबै ग्राहकहरूलाई राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ। द्रुत साइटहरूले रूपान्तरण मेट्रिक्स र खोज ईन्जिनको स्तर पनि सुधार गर्दछ ... यो एक महत्त्वपूर्ण घटक हो जुन हामीले चिन्ता लिनु पर्दैन।
WP क्यास - फ्लाईव्हीलको क्यास इञ्जिनका अतिरिक्त, तिनीहरू पूर्ण समर्थन गर्दछन् WP क्यास र WP रकेट जोड्नु। त्यो प्लगइन अविश्वसनीय छ - अल्छी लोड क्षमताहरू, मिनिफिकेशन, एकत्रीकरण, डेटाबेस मर्मतसम्भार, र पूर्व क्यास क्षमताहरूको साथ। यो लगानी गर्न लायक एक प्लगइन हो!
WordPress सुरक्षा - मजबूत ह्याकि techniques तकनीकहरूले WordPress को पुरानो संस्करण वा नराम्रा लेखिएका विषयवस्तु र प्लगइनहरूको सम्झौता गर्न सक्दछ। Flywheel तपाईंको संस्करण अनुगमन गर्दछ र यो सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईंको साइट अति संवेदनशील छैन किनकि हामी अन्य व्यक्तिको ग्राहकहरू ह्याक हुन जारी देख्छौं। काठमा दस्तक, हामीसँग कहिले पनि विवाद भएको छैन। र हामी त्यो प्रेम गर्दछौं Flywheel सक्रियतापूर्वक संस्करणहरू अपग्रेड हुनेछ यदि त्यहाँ एक प्रमाणित सुरक्षा जोखिम छ।
स्थिरता - Flywheel एक मजबूत मञ्च क्षमता छ कि तिनीहरु को लागी तपाइँको कुनै एक साइट मा सक्षम गर्न सक्छ, तपाइँ एक स्टेजिंग क्षेत्र मा तपाइँको साइट क्लोन सक्षम, मञ्जित साइट को अद्यतन, र तपाइँलाई तयार जब यसलाई फिर्ता लाई बस्न को लागी। यो एक अविश्वसनीय उपकरण हो जुन कोहीले पनि उनीहरूको साइटमा महत्वपूर्ण अपडेटहरू गर्न खोज्नु पर्दछ - नयाँ थिममा अपग्रेड गर्ने जस्तो।
यदि त्यो पर्याप्त छैन भने, Flywheel स्थानीय भनिन्छ आफ्नै डिप्लोयमेन्ट अनुप्रयोग विकसित। अनुप्रयोगले विकासकर्ताहरूलाई सक्षम पार्दछ:
एक क्लिकको साथ स्थानीय रूपमा साइट सिर्जना गर्नुहोस्!
डेमो यूआरएल मार्फत सम्पादन गर्नुहोस् र तपाईंको ग्राहक देखाउनुहोस्
लाई प्रकाशित गर्नुहोस् Flywheel केवल एक क्लिकको साथ (र यो मात्र कार्य गर्दछ)
हामीले सहयोग गरेका थियौं Flywheel ईन्जिनियरहरू पहिले नै मुद्दाहरूको संख्यामा। हामीसँग साइटहरू छन् जुन ह्याक गरिएको थियो र तिनीहरूको टोलीले सुरक्षा विज्ञहरू ल्यायो मुद्दालाई पहिचान गर्नका लागि (सामान्यतया एक प्लगइन) र यसलाई सुधार्न। हामीसँग साइटहरू छन् जससँग प्रदर्शन मुद्दाहरू छन् जुन तिनीहरूको टोली (र इन्टरफेस) ले हामीलाई समस्या निवारण र सहि मद्दत गरेको छ। हामीसँग अन्य होस्टहरू लोड गर्न १० सेकेन्ड लाग्ने साइटहरू छन् जुन २ सेकेन्ड अन्तर्गत लोड हुन्छ Flywheel.
र यो केवल हाम्रो दावीहरू मात्र होइन। हामीले हाम्रो सफलता अन्य एजेन्सीहरूसँग साझेदारी गरेका छन, र उनीहरूले आफ्ना सबै ग्राहकहरूलाई माईग्रेट गरेका छन् Flywheel। WordPress संग एक अद्वितीय विकल्प तपाइँको ग्राहकहरु लाई योजना खरीद गर्न को लागी अनुमति दिदैछ र तपाइँको टोलीलाई अधिकृत उपयोगकर्ताहरु को रुपमा जोड्नुहोस्। यो तपाइँलाई तिनीहरूको तर्फबाट समर्थन अनुरोध गर्न र प्रयोगकर्ता र SFTP पहुँच प्रबन्ध गर्न अनुमति दिन्छ - ग्राहकको खाताको स्वामित्वमा सबै। तपाईंको ग्राहकहरूलाई तपाईंको सम्बद्ध कोड प्रदान गर्नुहोस् र Flywheel पनि हुनेछ तिर्नु.
परिणामस्वरूप प्रदर्शन सुधारहरूले बाउन्स रेट घटाउन मद्दत गर्‍यो, पृष्ठमा समय विस्तार गर्‍यो, र पृष्ठ गतिमा सुधारको कारण - हामीलाई अविश्वसनीय खोज इञ्जिन दृश्यता प्राप्त गर्न मद्दत गर्‍यो। ओह ... र हो, यस पोष्टमा लिंकहरू हाम्रो सम्बद्ध लिंकहरू हुन्।
अन्य WordPress प्रबन्धित होस्टिंग प्रदायकहरू
WordPress प्रबन्धित होस्टिंग लोकप्रिय 'WordPress' विशाल अपनाना दिइएको छ। उही उद्योगमा केहि अन्य उत्कृष्ट होस्टहरू छन् र हामीले ती सबै प्रयोग गरेका छौं:
WPEngine - अब Flywheel को स्वामित्व छ! WPEngine सँग केहि सेयर गर्ने संसाधनहरू छन् तर केहि विशिष्ट सुविधाहरू छन्। एउटा हामीले ग्राहकको लागि चाहेको अनुपालनका लागि स्वचालित रूपमा पहुँच लग फाइलहरू डाउनलोड गर्ने क्षमता हो।
Kinsta - उद्योगमा उनीहरूको अविश्वसनीय पूर्वाधारको लागि केही ठूलो छालहरू बनाउँदैछ। तिनीहरू केहि धेरै ठूला ब्रान्डहरूको लागि केहि अविश्वसनीय रूपमा द्रुत साइटहरू चलाउँछन्।
टैग: wpengine को विकल्पउत्तम होस्टिंगflywheelफ्लाईव्हील स्थानीयनि: शुल्क एसएसएलअल्छी लोडस्थानीय WordPress विकासव्यवस्थित WordPress होस्टिंगWordPressWordPress बैकअपवर्डप्रेस क्याचिंगWordPress cdnWordPress डाटाबेस अनुकूलनWordPress विकासवर्डप्रेस फायरवालwordpress होस्टिंगवर्डप्रेस मालवेयरWordPress sslवर्डप्रेस स्टेजिंगWordPress समर्थनwpcachewpenginewpengine hosting
एडोब क्याप्चरको साथ फन्टहरू कसरी फेला पार्ने
आजको SERP: गुगलको बक्सहरू, कार्डहरू, रिच स्निपेट्स, र प्यानेलहरूमा दृश्य दृश्य
अगस्ट,, २०१ 26 2011:२१ अपराह्न
मैले तिनीहरूलाई जाँच गरेको छु तर यी सबै होस्ट गरिएको WordPress पसलहरूसँग मेरो सामान्य समस्या भनेको यो हो कि तपाईंले नियन्त्रणको तत्त्व छोड्नु पर्दछ जुन मलाई स्वीकार्य छैन। एउटा विशाल वेबसाइट चलाउन मलाई प्रत्येक पक्षको पूरा नियन्त्रण हुन आवश्यक छ - प्लगइनहरू र डाटाबेस पहुँच सहित। तिनीहरूको मूल्य निर्धारण प्याकेजहरूले पनि वास्तविकतामा कुनै अर्थ राख्दैनन् - k १०० / महिना २k०k पृष्ठदृश्य र १००bb को लागि? के एक अनियन्त्रित सीमा कि म २- weeks हप्ता मा हिट हुनेछ। म हाल मेडिया मन्दिर प्रयोग गर्दैछु (र यसको लागि धेरै भुक्तानी गर्दै) - र प्रत्येक 'अप्टिमाइजेसन' उपकरण प्रयोग गर्दैछ (क्यासिंग, सीडीएन, आदि) उपलब्ध म times -१० सेकेन्ड भन्दा बढी समय लोड गर्न सक्दिन। मैले प्रयास गर्न खोजेको बुँदा भनेको चाँदीको बुलेट छैन जब यो आउँदछ वर्डप्रेस छिटो चलाउनको लागि। मैले ती सबैलाई प्रयास गरेको छु।
तपाईं तिनीहरू संग जोनाथान सबै पक्ष नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो साइटसँग टन्स अनुकूलन र प्लगइनहरू छन् जुन हामी चाहने सबै थोकमा पूरा गर्नका लागि। मलाई विश्वास छ कि मूल्य निर्धारण औसत कर्पोरेट ब्लगको लागि राम्रो छ ... औसत व्यक्ति सीडीएनहरू कसरी बनाउने र क्यासिंग कसरी गर्ने भनेर जान्दैन, त्यसैले यो निश्चित रूपमा त्यो लागतको अन्तर्गत छ। BTW: हामी मेडिएटम्पल पनि प्रयोग गर्छौं ... एक CDN र क्लाउडफ्लेयरको साथ र यो केवल राम्रोसँग प्रदर्शन गरिरहेको छैन जस्तो हामी चाहन्छौं।
सेप्टेम्बर १,, २०११ 14::2011० अपराह्न
के तपाइँ मिडिया मन्दिरको ग्रिड सर्भर वा समर्पित भर्चुअल सर्वरमा WordPress साइट होस्ट गर्दै हुनुहुन्छ? मैले ग्रिडमा २ बर्षसम्म (mt) को साथ होस्ट गरेको साधारण साइट थियो र लोड समय केवल भयानक थियो, हास्यास्पद ढिलो थियो र व्यवस्थापक क्षेत्र गधामा मात्र दिक्क लाग्ने पीडा थियो। के मैले सम्पूर्ण अनुभव एकदम डरलाग्दो थियो भनेर भनेको थिएँ?
मैले ग्रिड कन्टेनर किन्नुबाहेक मेरो साइटलाई अनुकूलित गर्न सूर्यको मुनि सबै सम्भव भए र केहि पनि काम गरेन। यसलाई मिनिफाई, डब्ल्यूपी सुपर क्यास, इत्यादिसँग अनुकूलित गरियो। मैले अर्को डब्ल्यूपी होस्ट गरिएको साइटमा क्लाउडफ्लेयर प्रयोग गर्न कोसिस पनि गरें तर लोड समय हास्यास्पद हो। २० सेकेन्ड होम पेज लोड गर्न?
मैले मेरो साइटलाई होस्टगेटरमा सार्ने निर्णय गरें र यो गति रातारात तीन गुणा बढ्यो। मैले अझै (mt) कन्ट्रोल प्यानल याद गरेन जुन अविश्वसनीय हो तर मेरो साइटको गतिले एक राम्रो लहर इन्टरफेस ट्रम्प गर्दछ।
अब म नयाँ वेब होस्टको लागि फेरि किनमेल गर्दै छु तर यस समयमा मैले १० माइक्रो साइटहरू होस्ट गर्ने क्षमताको साथ मल्टिसाइट स्थापना गर्नुपर्नेछ। म (mt) समर्पित भर्चुअल, WP इञ्जिन र Page.ly मा हेर्दै छु। मिडिया मन्दिर एक धेरै राम्रो सम्झौताको रूपमा देखिन्छ र म पहिले नै ग्रिडमा उनीहरू द्वारा जलाइएको थियो, तर मलाई आश्चर्य छ कि यदि उनीहरूको समर्पित भर्चुअलले मलाई चाहिने गति बढावा दिन्छ र उनीहरूको नियन्त्रण प्यानलहरूको साथ प्रयोगको सहजता दिन्छ भने।
MT मात्र एक "सौदा" हो यदि तपाइँ WordPress को लागी कुनै विशेष समर्थन बिना एक मेशीन चाहानुहुन्छ। यदि तपाईं सुरक्षा आफैं गर्न चाहानुहुन्छ, आफैलाई छिटो गर्नुहोस्, आफै स्केलेबिलिटि गर्नुहोस्, आफै सीडीएन (र यसको लागि भुक्तान गर्नुहोस्)।
र त्यसपछि त्यहाँ उच्च-उपलब्धता छ। दुबै सफ्टवेयर र हार्डवेयर मुद्दाहरूको कारणले गर्दा, एक-सर्भर स्थापना क्लस्टरको रूपमा अत्यधिक उपलब्ध हुन सक्दैन।
हाम्रो दृष्टिकोणमा, $ २० / मो बचाउन प्रयास गर्दै तर आफै त्यो सबै चीजहरू गर्नु भनेको समय वा पैसाको राम्रो प्रयोग होईन। यो हाम्रो लागि सजिलो छ किनकि हामी हाम्रो सबै ग्राहकहरुमा ती सबैको लागत मोमुरेट गर्छौं; यदि तपाइँ टेकक्रन्च हुनुहुन्न भने एकल साइट गर्नको लागि मात्र यो अधिक हो।
धन्यवाद जेसन। म तपाईंको साथीलाई उद्धरणको लागि तपाईंको साइट मार्फत केही जानकारीहरू शूट गर्दै छु।
नमस्ते जोआनाथन, म बुझ्छु तपाईं कहाँबाट आउँदै हुनुहुन्छ, तर तपाईंले अहिलेसम्म प्रयास गर्नुभएन यदि तपाईंले हामीलाई कोशिस गर्नुभएन भने। 🙂
ती सीमाहरू एक मार्गनिर्देशन हुन् - हामी तपाईंको साइट वा केही बन्द गर्दैनौं यदि तपाईं तिनीहरूलाई हिर्काउनुहुन्छ, यसको मतलब यो हुन्छ कि यसले हाम्रो लागि अधिक मूल्य चुकाउँछ र यसले तपाईंलाई अधिक खर्च पनि गर्नेछ। हामी यसको बारेमा कुरा गर्न सक्छौं।
हामीसँग धेरै व्यक्तिहरू एक निश्चित बिन्दुलाई अनुकूलन गर्न असमर्थ भए, तर हामीसँग सुधारहरू हेर्नुहोस्। किनभने: http://wpengine.com/our-infrastructure .
साथै, हामी * गर्छौं तपाईंलाई प्लगइनहरू, कस्टम कोड, र डाटाबेस पहुँचमा नियन्त्रण दिन, त्यसैले हामी तपाईंलाई लक आउट गर्नेछौं भन्ने नसोच्नुहोस्!
यसको सट्टामा, किन हामीलाई एउटा मौका नदिनुहोस् ... तपाईंको ब्लगको प्रतिलिपि सार्नुहोस्, त्यसपछि मलाई ईमेल पठाउनुहोस् (जेसनमा जेसन) र हामी के गर्न सक्छौं हेरौं।
-9 -१० सेकेन्ड अस्वीकार्य छ। व्यक्तिगत रूपमा मैले थीसिसबाट वू फ्रेमवर्कमा स्विच गर्न पाएमा मेरो साइट उल्लेखनीय ढिलो भयो। म seconds सेकेन्डमा लोड गर्दै थिएँ र अब यसको मार्ग सुस्त छ।
मैले VPS साझा होस्टिंग भन्दा धेरै राम्रो पाएको छु र MT मा धेरै साइटहरू सारियो जुन मेरो विचारमा नौटंकी र झन्झट साथै धेरै महँगो पनि छ।
तपाईं सीपीनेलको साथ वीपीएस प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ युएसड $ for$ मा र वार्षिक प्याकेजहरूको लागि सस्तो। Plesk साथ VPS को लागि फेरि सस्तो
नमस्ते ब्राड ... यदि तपाईंले मलाई सोध्नुमा कुनै आपत्ति छैन भने, तपाईंले कहाँ पाउनुभयो "युएसपी $ for$ प्रति महिनाको लागि सीपीनेलको साथ वीपीएस"
के यो एमटीमा छ? तपाईले त्यहाँ धेरै साइटहरू सार्नुभयो भनेर बताउनुहुन्छ तर तिनीहरूको चालबाजी के हो? के तपाई उनीहरूसँग खुशी हुनुहुन्छ?
म तपाइँको टिप्पणीहरु द्वारा एक अलि भ्रमित छु।
अगस्ट 26, 2011 मा 11: 08 AM
बेनामी, मलाई लाग्छ कि तपाईका यी मानिसहरू एकदम थोरै फरक छन्। पहिले, तपाईंसँग SFTP पहुँच छ त्यसैले तपाईं प्लगिन साइडमा आवश्यक परिवर्तनहरू गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईंसँग पूर्ण फाईल पहुँच भएको कारणले तपाईं डाटाबेससँग जे गर्न चाहनुहुन्छ गर्न सक्नुहुन्छ। म पनि, MediaTemple मा छु र म क्यासिंग र CDN प्रयोग गर्दैछु ... तर तपाईं र म दुर्लभ जातका छौं। यदि कसैले पृष्ठको गतिलाई कसरी अप्टिमेट गर्ने भनेर बुझ्दैन भने, डब्ल्यूपी इञ्जिन एक उत्तम समाधान हो किनकी उनीहरूले प्रदर्शनको बारेमा चिन्ता गर्छन् त्यसैले तपाईंलाई आवश्यक पर्दैन। पृष्ठ दृश्य र ब्यान्डविथको भोल्यूम औसत कर्पोरेट ब्लगरलाई चाहिने भन्दा बढी छ। यदि तपाईं आफ्नो साइट अप्टिमाइज गर्न र सीडीएन कन्फिगर गर्न कुनै प्रोफेशनललाई भाँडामा लिनुहुन्छ भने, यसको लागि ज्यादै धेरै खर्च हुन्छ।
राम्रो भगवान तपाईको वेबसाइट छिटो लोड हुन्छ।
अहिले सम्म हैन - तर यो हुनेछ!
साँच्चै? मैले सोचें कि तपाईं पहिल्यै सर्नुभयो। यदि होईन भने तपाई गतिको साथ धेरै राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ जस्तो गरी छ।
मैले क्लाउडफ्लेयर प्रयोग गर्न शुरू गरें - यसलाई जाँच गर्नुहोस्, यो नि: शुल्क सेवा हो र मेडिएटम्पलमा हाम्रो होस्टिंग सर्भरको काफी भार लिएको छ। यो सब भन्दा छिटो होईन, तर समग्र गति यसको कारण सुधार हुँदैछ।
अति उत्तम। मैले तिनीहरूलाई जाँच गर्नुपर्नेछ। विडंबनाको कुरा, मेरो WPEngine को मेरो मनपर्ने सुविधा जब मैले यसलाई जाँच गरे यो गति वा वितरण थिएन। यो १-क्लिक स्टेजिंग थियो। त्यो कति राम्रो छ?
अगस्ट,, २०१ 28 2011:२१ अपराह्न
मलाई शंका छ कि जेसन कोहेनसँग सम्बन्धित केहि पनि ठोस सुनको हुनेछ। मलाई कहिले पनि उनको कोडकोलाबरेटरको आवश्यकता पर्दैन, एकल व्यक्ति टोली, LOL भएको। तर, म उनलाई पछ्याउँदै छु र दुई बर्ष भन्दा बढी उनको दर्शनको अध्ययन गर्दैछु।
जब उसले पहिलो पटक डब्ल्यूपी इञ्जिनको बारेमा लेख्यो, म उत्सुक थिए। अवश्य पनि, उसले समय-समयमा यसलाई रिट्वीट गर्‍यो र त्यस्तै प्रकारले म आज पप गर्दैछु।
विडम्बनाको कुरा, म सायद WP इञ्जिनका लागि तयार छैन, तर म क्लाउड फ्लेयरमा लुकिरहेछु।
यस कुराकानीमा अनुगमनको रूपमा - मैले एlotop्गोल्टिया.नेटका लागि होप्नेिंगलाई समाप्त गर्न थालें वापेनजिन र मेरो साइट धेरै छिटो चल्दैछ। मँ MT सर्वर राखीरहेको छु केहि अन्य साइटहरु को लागी जहाँ लोड समय एक मुद्दा होइन तर अब Ang Angia को हो जहाँ यो हुनु पर्छ।
यो एकल साइटको लागि धेरै महँगो छ। म सट्टामा अव्यवस्थित VPS को लागी जान्छु। मसँग असीमित डोमेनहरू र क्यासिंग प्रणालीहरू जस्तै xcache हुनेछ।